Sary Avy Any Venezoela: Teny Amin’ny Araben’i Bolívar · Global Voices teny Malagasy
Venezoelà sy ireo sary miboridana eny an'araben'i Bolivar
Voadika ny 02 Avrily 2019 13:01 GMT
“Desde la Av. Bolívar” by Guillermo Amador Bograd …………….”Desde la Av. Bolívar” avy amin'i Guillermo Amador Bograd
Tsy ny tetezana voalohany an”ny autoroute Caracas La Guaïra irery ihany akory no zavatra nirodana tamin'ny Alahady. Maherin'ny 1 500 ireo Venezoeliàna no nisintona ny vatasarihany mba ho an'ilay Amerikàna mpakasary, Spencer Tunick, izay naka sary olona maromaro nirotsaka an-tsitrapo ho alaina sary mitanjaka tany amin'ireo tanàndehibe erantany.
Guillermo Amador Bograd, izay nanao blaogy tao amin'ny El Modular sy Caracas Café, no tsy nanàla na akanjo iray aza, saingy nanatrika niaraka tamin'ny vadiny amin'ny maha-mpilatsaka an-tsitrapo azy ho an'ilay hetsika izay nofaritany ho toy ny “tokana sy tsy azo soloina”.
Taty aoriana, nidina teny amin'ny arabe i Tunick ary nanomboka nanisaka an'ireo olona tamin'ny andaniny sy ankilany, nanafangaro an'ireo nofo sy ireo fibikàna, mandrapakàny ny sary nivoaka tao anatin'ireo gazety tamin'ity maraina ity manerana ny firenena sy izao tontolo izao: ireo olona navondrona nanodidina ny Bolivar, toa ny raim-pianakaviana miaraka amin'ireo zanany mitanjaka, tena nahaliana tokoa.
Tena goavana ny asa fametrahana ny olona amin'ny toerany, ny famindran-toerana azy ireo eto tetsy sy teroa. Nandray anjara tamin'izay tarika izay koa ny vadiko ary nilaza izy fa: “tena nahatalanjona ny nahita ireo olona, avy amin'ny karazany rehetra, tena miboridana tanteraka ary toy ny hoe tsy misy bedy.” Tsy misy resaka veta tamin'izy ireo; tsy nijery azy ireo ihany koa izahay, fa dia olombelona fotsiny ihany ry zareo. Mifampibanjina ireo olona. Sady tsy ngeza no tsy mahia, miaraka amin'ireo nono plastika na tena izy; olombelona ireo, namana ary nanana ny hevitra finamanana izay mety hanome fangorintsinana ho anao hatrany anaty fanahinao. Mahalala fa tsy misy zavatra very, fa hoe misy ireo olona toa izao miaraka amin'ny fanahy tena madio, fa hoe rehefa tena alalinina dia mitovy daholo isika rehetra ary tsy sarinteny fotsiny io, fa tena zavamisy.
Nampifandray tamin'ny lahatsary iray i Robert Basler (tsy misy fepetra fiarovana) ahitàna ireo sary nalaina izay hanazavan'i Tunick ny antony nifidianany ny toerana misy ny Avenida Bolivar :
Hmmm, nofidiako ity toerana ity satria noheveriko ireo tranobe hoe nitovy taminà trozona iray any amin'ny Antarktika izay tsy misy hoditra sy taolana intsony, toy ny hoe efa fantatrareo izay tiako lazaina? Noho izany, noho izany, izaho ihany koa, mahatsapa fa tena sary an'ohatra famantarana ilay trano amin'izay dikany izay. Ary avy eo, avy eo, tiako ny faratazana entin'ilay arabe migodana miaraka amin'ireo arabe goavana, foana tsy misy na inona na inona, karankaina.
Rimrod, izay manoritsoritra ny tenany ho “injeniera iray, mpanoratra , poety , astronoty , mpanamory ary mponina ao Venezoelà” no milaza fa tanaty alina iray monja dia nanaka-danitra ny fitsidihana ny bilaoginy (ES), satria ireo mpitsidika tonga hikaroka vaovao mikasika an'i Venezoela sy Spencer Tunick.
Any anaty birao, anaty onjam-peo, eny rehetra eny, miresaka ny sary nalain'i Spencer sy ny fahasahiana nananan'ireo modeliny efa ho 1 500 avokoa. Tsy afaka nandeha tany ny tenako satria somary sarotsarotra, fandehanana maherin'ny kilometatra anjatony tsy misy atao afa-tsy ny miboridandridana eny afovoan'ny arabe fotsiny. Saingy ekeko fa mety hanao izany aho mba ho traikefa sy ho an'ny kanto fotsiny. Noho izany, maneho fanajàna an'ireo modely an'arivony nalain'i Tunick aho.
Farany, Afrael, mpiavy avy any Venezoelà ary monina any Etazonia ankehitriny, mampaneno lakolosy manao hoe:
Andro tsara anio, mbola ho ao anaty vaovao iraisam-pirenena indray i Venezoelà fa tsy noho ny fantsona goavambe na noho ireo fehezanteny sahala amin'ny hoe “Andriamatoa Danger, ampondra ianao.” Tsia, i Spencer no nahazoantsika izany, Spencer Tunick, izay, miaraka amin'ny fakantsariny sy ny fomba mahazatra azy amin'ny fifohazana maraina be, dia naka sary an-jatony tamin'ireo Venezoeiàna maromaro nisalotra “ny akanjon'i Adama (sy Eva).”
Hafahafa, na olona 7 000 aza no nisoratra anarana, latsaky ny 1 500 no tonga niseho, saingy toy ny hoe mbola latsak'izay no hita eo amin'ny sary. Tena tsy haiko marina. Angamba i Guillermo (ES) na i Huguito (ES) afaka manamarina ny isan'ny olona tonga teo. Na dia tanàna misokatra ara-tsaina aza i Caracas, tena saro-kenatra izahay sady mpifikitra amin'ny nentin-drazana raha vao resaka fiboridandridànana imasom-bahoaka. Sa ve, mety ho vokatry ny fikatsahana tsy misy farany ny hanana vatana tonga lafatra izany, izay nitarika ny maro hanitsaka ny hisatra.